Sidaynu Aqoonsi U Heli Karnaa:? W/Q,: Ahmed Nuur Guruuje – somalilandtoday.com
Sidaynu Aqoonsi U Heli Karnaa:? W/Q,: Ahmed Nuur Guruuje
Waagii uu socday dagaalkii loo yaqaanay dagaalka Xidiguhu ayaa Haayaddii Wadanka Maraykanka hawshaa u qaabilsanayd ayaa ninkii mareeyaha ahaa oo ahaa nin maskax badan oo aqoon yahan ihi , wuxuu shaqaalihii haayadiisa u sheegay in ay gaadhi karaan hawadda keliya hadii qof waliba shaqadiisa sidda ugu fiican u qabsado , hadii uu yahay waashiman , Engineer ilaa maareeye guud .
Muddo markii hawshi socotay , hassa yeeshee aanay weli gaadhin meel la taaban karro , ayaa Madaxwaynihii Maraykunku booqasho ku yimi , dabeeto wuxuu la kulmay waashimaankii oo shaqadiisa ku jirra , si fiicana wu shaqaynaya ka dibna waxaa dhex maray sheekadan .
Madaxwayne , ka waran shaqadaada .
Washiman , shaqadaydu way fiican tahay , waxaanu dadaal ugu jiraa in aanu dhawaan hawada gaadhno .
Madaxwayne , Adiga shaqadaadu waa maxay
Washiman , aniga shaqadaydu waa Parking hagaajiye .
Madaxwayne , oo hadaa hadii aad tahay Parking hagaajiye sidee shaqadaadu ula xidhiidaa gaadhista hawada .
Washiman , shaqadaydu waa ta ugu mudan dadaalka haayadaydu wado , hadii aan parkingku hagaagin shaqadu hagaagi mayso , khuburadu shirkadda subaxdii waxa waqtigu kaga lumayaa intay parking raadinayaan , intay shaqada ku jiraana waxay ka warwarayaan siday u bixi karan markay rawaxayaan , markay rawaxaana meel ay ka baxaan heli maayaan , hadii cid kale noo timaadana way ku dhib mudanaysaa , markaa parkinga ayaan hagaajiyaa si ay shaqadu u hagaagto .
intaa ka dib Madaxwaynuhu wuxuu la shiray shaqaallihii shirakada iyo madaxdii , waxaanu ku yidhi ” Markaan idiin imi waan ka warwarasanaa dadaalkeena , laakiin waxaan idiinku hanbalayeynayaa dadaalkiina , waxaanan ku qancay sidda uu ii qanciyey parking hagaajiyuhu , sidaan hubana hawada dhawaan waa gaadhaysaan .
Markaa suaasheenii aynu usoo noqonee , Aqoonsi waxaynu helaynaa , marka qof waliba u arko in shaqadiisu tahay ta uu ku xidhan yahay aqoonsigu , marka dawlada hoose xashiishka ula dagaalanto in aynu aqoonsi helo , marka dhakhaatiirtu dadaasho , marka qof walba iyo qayb waliba shaqadeeda wanaajiso , ayaynu aqoonsiga heleynaa .